भुलेर पनि नलगाउनुहोस् अनुहारमा यस्ता चिज !! | सुदुरपश्चिम खबर
भुलेर पनि नलगाउनुहोस् अनुहारमा यस्ता चिज !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ 39
१. सनस्क्रीनस्गर्मी महिनामा मानिसहरुले सुर्यको पराबैजनी किरणबाट बच्नको लागि सनस्क्रीनको प्रयोग गर्ने गर्दछन । खासगरी महिलाहरुले यसको प्रयोग बढी गर्ने गर्दछन । तर सनस्क्रीनमा विभिन्न किसिमका रसायनहरु मिसाइएको हुन्छ । जस्तै ः रेटीनल पाल्मीटेट , अक्सिबेन्जोन । यस्ता रसायनहरुले छालाको क्यान्सरका कारक घाउ तथा ट्युमरलाई बढाउनमा मद्दत गर्दछ ।
समाधान ः सनस्क्रीनमा लेखिएको कुरा पढेर मात्र यसलाई किनेर प्रयोग गर्नुहोस । प्रायगरी जिन्क सनस्क्रीनको प्रयोग राम्रो हुन्छ । सकेसम्म स्प्रे सनस्क्रीनको प्रयोग नगर्नुहोस । र यस्ता सनस्क्रीनको प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला छालाको बिशेषज्ञको सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ ।
समाधान : यसको समाधानको लागि तपाइले अर्ग्यानिक मस्काराको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । मस्काराको प्रयोग ६ महिनाभन्दा बढी नगर्नुहोस । नयाँ पुस्ता बाट सभार